အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 46 of 48 | Frontier Myanmar
တစ်နှစ် ဒေါ်လာ တစ်ဘီလျံခွဲနီးပါး တန်ဖိုးပမာဏရှိတဲ့ ကားတင်သွင်းမှုဈေးကွက် ဘာအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အရင် စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တုန်းကတော့ သာမန်ပြည်သူတွေကို ပြည်ပကနေ ကားတင်သွင်းခွင့် လုံးဝ ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ကာလကြာရှည် ကားတင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ ကားအလွန်ရှားပါးပြီး အိုမင်း ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ကားတွေပင်လျှင်.
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်း ခုထက် ပို မြင့်မားလာနိုင်မလား
လာမယ့် ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကို တစ်ကားပြီးမှ တစ်ကား ရုံတင်ပြသနေရာကနေ တစ်ကားထက်ပိုတဲ့ ကားပြိုင်စနစ်နဲ့ ရုံတင်ပြသတော့မယ် စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လာမယ့် ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ.
ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်း၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာ ဘယ်အချိန်ကျမှ ရပ်မှာလဲ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကြီးတစ်ခုကတော့ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းနေတာ၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာ၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ အသုံး ကျယ်ပြန့်လာတာ (Dollarization) စတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာ ကာလ အတော်ကြာနေပါပြီ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်.